सलिन कस्तो चलचित्रमा काम गर्दै छन् ? (भिडियो)
सिनेपाटी | प्रकाशित: 2074, फाल्गुन 15, मंगलबार
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’बाट सिनेमा नगरीमा डेव्यु गरेका नायक हुन् – सलिनमान बनिया । पहिलो चलचित्रबाट राम्रो चर्चा पाएका सलिनको चकलेटी लुक्स, हेयर स्टाइल र अभिनयको कारण छोटो समयमा नै निकै फ्यान बनाउन सफल भए। पहिलो चलचित्र सफल भएपछि उनी लगातार अरू चलचित्रमा देखिन्छन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर ए मेरो हजुर २ रिलिज भएपछि उनी गुमनाम जस्तै भए । बेलाबखत प्रेमप्रसंगले मिडियामा आएता पनि सलिन कुनै चलचित्रमा अनुबन्धित भएको खबर बाहिरिएन् । किन गुमनाम हुनु भयो ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा सलिन भन्छन् ‘चलचित्रमा धेरै समय व्यस्त भए । परिवारलाई समय दिन पाएको थिइन् । परिवारको लागी केही समय दिएको हो । अब चाँडै नयाँ चलचित्र गर्दैछु । ’
पहिलो चलचित्र सफल भएपछि सलिनलाई धेरै अफर आएको उनी निकट बताउँछन् । किन गरेनन् सलिनले अफर स्वीकार ? ‘राम्रो कथा नै पाइन् । अफरहरु धेरै आए । पारिश्रमिक पनि राम्रो दिने धेरै छन् । तर मैले सोचेको जस्तो कथा पाएको छैन । ’ सलिन भन्छन् । कस्तो चलचित्र गर्नु हुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘मलाई चलचित्रमा मरमसला सबै भएको चाहिन्छ । प्रेम, रोमान्स, कमेडी, एक्सन मिश्रित सिनेमामा काम गर्न मन छ ’ ।
यति बेला सलिन ‘ए मेरो हजुर ३’का अनुबन्धित भएको खबर बाहिरिएको छ । केही दिन अघि निर्माता सुनिल कुमार थापाले आफ्नो फेसबुकमा सलिनसँगको फोटो राख्दै ‘ए मेरो हजुर २’को तयारी भनेर लेखेका थिए ।